၂၀၁၉ - ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သိကောင်းစရာ ပို့ချချက် (အင်္ဂလိပ်စာ)
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပို့ချချက် (အင်္ဂလိပ်စာ) အတွက် ဒေါက်တာ ပိုးပိုး ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး) အင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှ ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ် မေးခွန်းဟာ ယခင်နှစ်တွေနဲ့မတူ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှု ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ဖြေဆိုမှု လျော့နည်းစေပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု (Critical Thinking) နှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်မှု (Communicative Skills) ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့ ခေတ်နှင့်လျော်ညီတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်က စတင် ပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အခက်အခဲ မဖြစ်စေဘဲ သူတို့ရဲ့ စဉ်းစားဉာဏ် ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် အကျိုးကျေးဇူးကို ရှေးရှုပြီး မေးခွန်းအချို့ကို မွမ်းမံပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း တွေကို ကျောင်းသားအများဆို ဖြေဆိုနိုင်မယ့် လွယ်၊ သင့်၊ ခက် မေးခွန်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်လို့ သင်ခန်းစာများကို ကျေညက်စွာ လေ့လာထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဖြေဆိုနိုင်မယ့် မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ မေးခွန်းပုဒ်ရေ စုစုပေါင်း (၉)ပုဒ်ကို ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းအများစုဟာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ အကြောင်း အရာတွေကို အခြေခံပြီး မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ်(၁) ကတော့ ယခင်နှစ်တွေကအတိုင်း သင်ခန်းစာ (၁၄) ခုထဲက စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ပေးထားပြီး အဲဒီစာပိုဒ်မှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေးခွန်းအမျိုးအစား(၂)မျိုးနဲ့ မေးမှာဖြစ်တယ်။
Question No. I (A) Write the correct word or words to complete each sentence.ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့စာကြောင်းကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဝါကျ(၅)ကြောင်း ပေးထားပြီး ပေးထားတဲ့ ကွက်လပ်မှာ စာလုံးတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် စကားစုတစ်စုနဲ့ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ပေးထားတဲ့ဝါကျရဲ့ တည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်ပြီး သင့်လျော်သလို စကားလုံးတွေကို ပြောင်းရေးဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ - စာပိုဒ်ထဲမှာ Noun သို့မဟုတ်Adjective နဲ့ရေးထားပေမယ့် ဖြည့်ရမယ့် ကွက်လပ်မှာ Verb ပြောင်းပြီး ဖြည့်ချင်ဖြည့် ရပါမယ်။ စာပိုဒ်ထဲမှာ PassiveVoiceနဲ့ ရေးထားပေမယ့် ဖြည့်ရမယ့် ကွက်လပ်မှာ Active Voice နဲ့ ဖြည့်ချင်ဖြည့်ရပါမယ်။
ဥပမာ - စာပိုဒ်ထဲမှာ Different people have different ideas of beauty or handsomeness. လို့ ပေးထားပေမယ့် မေးခွန်းမှာ Ideas of beauty and handsomeness ---------- from person to person.လို့ ပေးထားရင် ဒီကွက်လပ်မှာ ဖြည့်ရမယ့်စကားလုံးက Verb ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် Different ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ထဲက စာလုံးကို ဒီအတိုင်း ပြန်ကူးရေးလို့မရပါဘူး။ Different ကို differ လို့ ပြောင်းပေးမှ အဖြေမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ Active Voice ကို Passive Voice နဲ့ ပြောင်းဖို့ လို ကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ- စာပိုဒ်ထဲမှာ Helen was almostawild child. No one could control her. လို့ပေးထားပေမယ့် မေးထားတဲ့စာကြောင်းက Helen could not ---------- by anyone, because she was almostawild child. လို့ပေးထားမယ်ဆိုရင် ဒီစာကြောင်းမှာဖြည့်ရမယ့် စကားလုံးဟာ Passive Voice ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် control လို့ ဖြေပေးလို့မရပါဘူး။ be controlled လို့ရေးမှ အမှန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Question No. I (B) ကတော့ Answer each question in one sentence. ဖြစ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို မေးတဲ့မေးခွန်း(၅)ခု ပေးထားပြီး ဒီမေးခွန်းတွေကို ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ထဲက အဖြေရှာပြီး ပြည့်စုံတဲ့ဝါကျတစ်ကြောင်းနဲ့ ဖြေပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်ပြည့်ရရှိဖို့အတွက် မေးခွန်းမှာမေးတဲ့ အချက်အလက် (fact) ရော သဒ္ဒါ (grammar) ပါ မှန်မှန်ကန်ကန်နိုင်အောင် များများလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာ - She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. လို့ပေးထားပြီး When Helen became angry and violent, what did she do? လို့မေးခဲ့ရင် ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ထဲကစာကြောင်း She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. ကို ပြန်ကူးချလို့ မရပါဘူး။ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်ကောက်ပြီး When Helen became angry and violent, she threw things onto the floor or at other people. လို့ ပြန်ဖြေပေးရပါ့မယ်။
The beach resorts at Pattaya and Phuket offerawide range of activities from scuba diving and windsurfing to golf. ဒါ့အပြင် What examples of water sports are given in the passage? လို့မေးခဲ့ရင် The examples of water sports (that are) given in the passage are scuba diving and windsurfing လို့ ဖြေမှမှန်ပါမယ်။ water sports ကို မေးတာဖြစ်လို့ golf ကို ထည့်ရေးရင် အမှတ်ပြည့်မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စာပိုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ဖြေဆိုရတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေလည်း မေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - Some think that men who are tall, dark and muscular are handsome but for some, those who are fair and slightly built are cute ... Girls who are tall usually long to be dainty and small, and vice versa; plump girls with rosy round faces would love to be pale and delicate; slender girls with very white skin hate their pale and colourless look. ဆိုတဲ့ ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာပိုဒ်ပေးထားပြီး What kind of boy or girl would you like to be ? လို့မေးခဲ့ရင် ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို ကိုးကားပြီး I would like to beatall, dark and muscular boy.(သို့မဟုတ်) I would like to beaslender girl. လို့ပဲ ဖြေလို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Iwould like to beabeautiful girl. လို့ ရေးလို့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ယုတ္တိရှိတဲ့ အဖြေဖြစ်ဖို့နဲ့ သဒ္ဒါမှန်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ စာပိုဒ်များနဲ့မေးခွန်းတွေကို အလွတ်ကျက်မှတ်တာထက် မေးခွန်းအမျိုးမျိုးကို တတ်အောင် လေ့ကျင့် ထားဖို့လိုပါတယ်။ စာပိုဒ်ထဲက သက်ဆိုင်တယ်ထင်တဲ့ စာကြောင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ကူးချပေးလိုက်တာမျိုးလည်း မပြုလုပ်ကြဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ မေးထားတာကို ဆီလျော်အောင် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာပါတဲ့ သင်ခန်းစာ(၁၄) ခု ထဲက စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ပေးထားပြီး (၈)လုံးမြောက် စကားလုံးတွေမှာ ကွက်လပ်ဖြည့် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွက်လပ်ပေါင်း(၂၀)ရှိပြီး ဒီကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်စွက် ဖို့ စကားလုံး(၂၅)လုံးကိုလည်း ပေးထားပါတယ်။
သတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ စာလုံး(၅)လုံး ပိုပေးထားတာပါပဲ။ စာပိုဒ်ကြီး တစ်ပိုဒ်လုံးကို ပြန်ကူးရေးဖို့မလိုပါဘူး။ ကွက်လပ် နံပါတ်နဲ့ အဖြေကိုသာ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်မှုကို ခြုံငုံစစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ်(၃) ကိုတော့ ယခင်နှစ်များနဲ့မတူဘဲ III(A)နဲ့ III(B) ဆိုပြီး (၂)ပိုင်း ခွဲထားပါမယ်။ III (A) ကတော့ Choose the appropriate word to complete the sentences. ဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်စာအုပ်ထဲမှ စကားလုံးများကို ကွက်လပ်ဖြည့်မေးခွန်းအနေနဲ့ ဝါကျအသစ်မှာ ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ဖို့ စကားလုံး (၃)လုံး ပေးထားပြီး မှန်တဲ့စကားလုံးကို ရွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Space travel is one of the ----------- of modern science and technology. လို့ပေးထားပြီး ရွေးချယ်စရာ A. activities B. wonders C. surprises လို့ ပေးထားပါ့မယ်။
အဖြေမှန်က B.wondersလို့ မေးခွန်းနံပါတ်နဲ့အဖြေကို ရေးပေးရပါမယ်။ ပေးထားတဲ့ဝါကျရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာ သိရှိမှ အဖြေမှန်ကို ရွေးချယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ Animals can be classified ---------- different types ဖြစ်ပြီး ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေက A. into B. in C. ont ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အမှန်က A. int ဖြစ်ပါတယ်။ မေးထားတဲ့ ဝါကျတစ်ကြောင်းလုံးကို ပြန်ကူးဖို့ မလိုပါဘူး။ နံပါတ်တပ်ပြီး အဖြေကိုရေးရင် ရပါတယ်။
III (B) ကတော့ Write the appropriate words or groups of words to complete the lines of verse. ဖြစ်ပြီး ကဗျာ(၇)ပုဒ်ထဲက ကောက်နုတ်ချက်တွေကို ကွက်လပ်ဖြည့်မေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ သင်ယူထားတဲ့ကဗျာတွေကို နားလည်မှတ်သားပြီး ပြန်လည်ရေးသားနိုင်မှုကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တိတိ ကျကျ ပြန်လည်ဖော်ပြဖို့လိုတဲ့ အတွက် စာလုံး ပေါင်းမှားယွင်းမှု မရှိအောင် သတိထားကြဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာ- A great steel bridge With towers ------------ လို့မေးရင် stiff and tall လို့ ဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကို ပြန်ကူးဖို့မလိုပါဘူး။
မေးခွန်းနံပါတ်(၄)ကတော့ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကို ကျေကျေညက်ညက် လေ့လာထားမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့ မေးခွန်း(၅)ခု မေးထားပါတယ်။
ယခင်နှစ်များကလို ရွေးချယ်စရာပေးမထားတာကို သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဟာ အချက်အလက်ရောသဒ္ဒါပါ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဖြေကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ What are nightmares and when do they occur ? လို့ မေးထားတယ်ဆိုရင် Nightmares are terrifying dreams,acollection of confused thoughts and they occur towards dawn. လို့ ပြန်ဖြေ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Name two advantages of self-service supermarkets. လို့မေးခဲ့ရင် Two advantages of self-service supermarkets are that there is no waiting to be served and there isawide variety of choice. လို့ ပြန်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
"Oh, to hell with your stars and constellations!" ဆိုတဲ့ ပုံစံလည်း မေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် The philosopher, the medico, the man of music and dancing said these words to the astrologer. They mean that after plucking the tender bael leaves, the astrologer was waiting for the influence of the descending constellations to come down. Therefore his three friends became impatient with him and yelled at him saying these words. လို့ ဖြေပေးရမှာပါ။
ဒီမေးခွန်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ သင်ခန်းစာ (၁၄) ခု လုံးမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ်ဖတ်ပြီး မှတ်သား ထားဖို့လိုပါတယ်။ ယခုပြတဲ့ အဖြေတွေက နမူနာအဖြေများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုရင်းမှန်ကန်တဲ့ သဒ္ဒါမှန်တဲ့ ဘယ်အကိုမဆို လက်ခံပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ်(၄) အပုဒ်ငယ်(၅)ကတော့ ကဗျာတွေထဲက စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက်ကို ပေးထားပြီးဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်ကို ရေးခိုင်း တာဖြစ်ပါတယ်။ What do these lines mean? လို့ မေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ဖို့ကတော့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ကဗျာတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်သိရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကဗျာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်ရော သဒ္ဒါရော မှန်ရပါမယ်။
ဥပမာ - What do these lines mean?
In his own ground. ဆိုတဲ့ ကဗျာထဲက စာကြောင်း(၂)ကြောင်းကို ပေးထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီကဗျာ(၂)ကြောင်း ကို စကားပြေပြန်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ်(၅) ကတော့ ယခင်မေးခွန်းများနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ပေးထားပြီး မေးခွန်း(၅)ခုကို ဖြေပေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်က ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာပိုဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ အသက်အရွယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အကြောင်းအရာပိုင်းနဲ့ language တို့ပါဝင်တဲ့ စာပိုဒ်မျိုးဖြစ်ပါမယ်။
ဥပမာ - စာပိုဒ်က Forests and trees aren't just pretty to look at. They do an important job making the earth's environment suitable for life. They clean the air, store water, preserve soil, and provide homes for animals. They also supply food, fuel, wood products, and paper products for humans. လို့ ပေးထားပြီး What do forests and trees provide animals and humans? လို့မေးရင် အဖြေက Forests and trees provide homes for animals and food, fuel, wood products, and paper products for humans. လို့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေပေးရပါမယ်။
ဒါ့အပြင် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ စာဖတ်ပြီး နားလည်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးတဲ့အနေနဲ့ စာပိုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာကို တိုက်ရိုက် မမေးဘဲ ဆက်စပ်ပြီးမေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေလည်း မေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - paper တွေကို recycle လုပ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းပါတဲ့ အောက်ပါစာပိုဒ်ကို ပေးထားပြီး paper တွေအပြင် အခြားဘာတွေကို recycle လုပ်လို့ရလဲလို့ မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေလည်း ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ How can you use less paper? One answer is to reduce your paper use by using both sides of the paper when you photocopy, writealetter, or writeapaper for school. ...A final answer is to recycle used paper products instead of throwing them away. Most schools, offices, and neighbourhoods have some kind of recycling centre. What other materials can we recycle apart from paper ? လို့မေးရင် Apart from paper, we can recycle plastic, glass, and iron. လို့ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမေးခွန်းတွေဟာ open-ended ဖြစ်လို့ အဖြေက တစ်ခုထက်မက ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ သဒ္ဒါမှန်တဲ့ မည်သည့် အဖြေကိုမဆို အမှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေက တစ်ပုဒ်ကို (၂)မှတ် ပေးတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အဖြေ တစ်ဝက်လောက်မှန်ရင်လည်း အမှတ်တစ်ဝက်ရနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ် (၆) ကတော့ capital letter, comma, semi-colon, colon, full stop, question mark, open and close inverted commas, exclamation mark, apostrophe so) Punctuation como osmos သုံးတတ်မှုကို စစ်ဆေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Punctuate the following. လို့ မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Punctuation တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ Punctuation မေးခွန်းအတွက် အလွတ်ကျက်မှတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ဝါကျရဲ့အစ စကားလုံးတို့၊ လူနာမည်တို့ကို capital letter နဲ့ရေးဖို့၊ ဝါကျအဆုံးမှာ အဆိုဝါကျဖြစ်ရင် full stop သုံးဖို့၊ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်က ပြောတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပေးထားရင် အဲဒီစကားလုံးတွေရဲ့ အစနဲ့အဆုံးမှာ inverted comma တွေ သုံးဖို့ သိရပါမယ်။
ဥပမာ - the teacher said if you dont listen carefully you wont know what to do လို့ပေးထားရင်The teacher said, “If you don't listen carefully, you won't know what to do.” လို့ ပြန်ရေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ်(၇) မှာ အပိုင်း(၂) ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ပထမပိုင်း VII.(A) က Stylistic Transformation. Finish each sentence in suchaway that it means exactly the same as the sentence that is given. လို့ မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ ဝါကျ (၁၀) ကြောင်း ကို အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းလဲစေဘဲ ပြန်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလို အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းလဲဘဲ တည်ဆောက် ပုံမတူတဲ့ ဝါကျတွေ နဝမ တန်းနဲ့ ဒသမတန်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို များများလေ့ကျင့်ရင် ဒီအပိုင်းကို ကောင်းကောင်း ဖြေဆိုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း VII.(B) ကတော့ Using the prompts given, writeavery short paragraph on: ဆိုပြီး ရွေးစရာ(၂)ပုဒ်ပေးပါမယ်။ ပေးထားတဲ့ prompt တွေကို သုံးပြီး စာပိုဒ်တိုလေး တစ်ပုဒ်ရေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ရေးသားကျက်မှတ်ထားတာတွေကို ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ ချရေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်ပိုင်နိုင်စွာရေးနိုင်မယ့် တစ်ပုဒ်ကိုရွေးပါ။ မလိုတာတွေ ထည့်မရေးပါနဲ့။ writeavery short paragraph ဆိုတာကို သတိပြုပါ။
ပေးထားတဲ့ prompt အားလုံးကို ပြန်သုံးပြီး သဒ္ဒါမှန်တဲ့ ဝါကျတွေ ရေးရမှာမို့လို့ ကိုယ်ပိုင်ဝါကျတွေ တည်ဆောက်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားကြပါ။ ဥပမာ - The moon:anice place to visit ? အကြောင်းကို ရေးခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့။ ပေးထားတဲ့ prompt တွေက moon - satellite - earth - it - about 240,000 miles away - our planet earth goe The moon isasatellite of the earth, and it is about 240,000 miles away from our planet earth. လို့ ၀ါကျကို မှန်မှန်ကန်ကန်တည်ဆောက်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
moon နဲ့ earth တို့မှာ article “the” လိုအပ်ပြီး satellite ရှေ့မှာတော့ article “a”လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် the moon နဲ့asatellite ကြား it နဲ့ about 240,000 miles ကြားမှာ verb to be ဖြစ်တဲ့ is ကို ထည့်ပေးရမှာပါ။ The moon isasatellite နဲ့ the earth is about 240,000 miles away from our planet earth နှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးဖို့ conjunction “and”” နဲ့ comma (,) တို့ကိုလည်း ထည့်ပေးရမယ်။ ဒါတွေကို သိပြီး ဝါကျအဖြစ် တည်ဆောက်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
စာပိုဒ်ကို ရေးဖို့ဆိုရင် articleတွေ၊ preposition တွေ၊ conjunction တွေ၊ Pronoun တွေနဲ့ punctuation တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုပြီး များများလေ့ကျင့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲက စာပိုဒ်တွေကို တိုက်ရိုက်ပေးထားမှာ မဟုတ်လို့ အလွတ်ကျက်မှတ်တာထက် မိမိကိုယ်တိုင် ဝါကျတွေကို တည်ဆောက်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားကြပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၈) ကတော့ Letter writing ဖြစ်ပါတယ်။ Chooseasituation given below and writealetter. Do not write more than 300 worls. လို့ မေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့
မေးခွန်း(၂)ပုဒ်ထဲက ကြိုက်ရာတစ်ပုဒ် ကိုရွေးပြီး စာလုံးရေ(၃၀၀)ထက် မပိုအောင် ရေးသားဖြေဆိုရပါမယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဆိုတဲ့အခါ သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့ ပေးထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက် တွေကို သေသေချာချာဖတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ(၁) နဲ့ စာလက်ခံ ရရှိမယ့်သူ (Addresser)နဲ့ စာလက်ခံရရှိမယ့်သူ (Addressee) တွေကို သေသေချာချာသိဖို့လိုပါတယ်။ (၂) ဘာအကြောင်းအရာရေးရမလဲဆိုတာ သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။ ရေးခိုင်းတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချက်လား၊ နှစ်ချက်လားဆိုတာ သေသေချာချာဖတ်ပြီးမှ ရေးဖို့လိုပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ကတော့ မေးခွန်းမှာ စာရေးသူ (Addresser) နဲ့စာလက်ခံရရှိမဲ့သူ(Addressee) တွေရဲ့ နာမည်ကို ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိနာမည်၊ မိမိကျောင်း၊ မိမိမြို့စတာတွေကို လုံးဝထည့်မရေးဖို့ အထူးသတိပေးချင်ပါတယ်။
ဥပမာ - You are Thida and you live at No.7, Insein Road, Yangon. Write to your aunt, who has been teaching high school students for nearly twenty years. Tell her how much you fear the matriculation examination and request her to give you some advice to overcome your fear. ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုကြည့်ရင် အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ပါပါတယ်။
ပထမအချက်က how much you fear the matriculation examination နဲ့ ဒုတိယအချက်က request her to give you some advice to overcome your fear ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိစာမေးပွဲကို ဘယ်လိုကြောက်ကြောင်း၊ ဒီလိုကြောက်ရွံ့မှုကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အဒေါ်ထံက အကြံဉာဏ်တောင်းလိုကြောင်းနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူက အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကို နှစ်(၂၀)နီးပါး သင်ကြား နေ တဲ့ ဆရာမဖြစ်လို့ မိမိကို အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အချက်နှစ်ချက်လုံးကို တိတိကျကျ ဆီလျော်မှုရှိအောင်ရေးမှ အမှတ်ကောင်းကောင်းရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းမှာ မေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို သေသေချာချာမဖတ်ဘဲ အလွတ်ကျက်ထားသမျှ အားလုံးချရေး တာမျိုးဟာ မေးထားတာနဲ့ မဆီလျော်လို့ အမှတ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ပါဘူး။
မေးခွန်းနံပါတ် (၉) ကတော့ Write an essay of three paragraphs on ONE of the following. Do not write more than 500 words. ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ် (၃) ခု ထဲက မိမိအပိုင်နိုင်ဆုံး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ရွေးပြီး ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Places of recreation in Myanmar ကို ကိုယ်ကျက်ထားတာက Tourist Attractions in Myanmar ဖြစ်ခဲ့ရင် အနည်းငယ် တူညီတယ် ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ကွာခြားချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ဖော်ပြတဲ့နေရာတွေက recreation အတွက် သွားလို့ရတဲ့ နေရာ၊ ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင် စရာတွေ ပေးနိုင်တဲ့ အပန်းဖြေလို့ရတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ရပါမယ်။
ဘုရားအကြောင်းတွေ၊ သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်ကြောင်းတွေ ရေးသားမယ်ဆိုရင်တော့ မဆီလျော်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သေသေချာချာ စဉ်းစားတွေးတောပြီးမှ ရေးဖို့လိုပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ စာစီစာကုံးနဲ့ပေးစာတွေကို ကောင်းကောင်းရေးနိုင်ဖို့
(၁) Organization - ဖွဲ့စည်းပုံကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေကို နိဒါန်း၊ စာကိုယ်၊ နိဂုံးစသဖြင့် အစီအစဉ်ကျကျ ရေးနိုင်ရပါမယ်။
(၂) Relevancy - ဆီလျော်မှုရှိခြင်း၊ မိမိရေးရမယ့် အကြောင်းအရာနဲ့ ဆီလျော်တာကိုပဲ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝသက်ဆိုင်မှု မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးခဲ့ရင် ဆီလျော်မှု မရှိလို့ အမှတ်မရ နိုင်ပါဘူး။
(၃) Content - အချက်အလက်မှန်ကန်ပြည့်စုံခြင်း။ ရေးရမယ့် အကြောင်းအရာနဲ့စပ်လျဉ်းတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ ဥပမာတွေကို စိတ်ကူး စိတ်သန်း ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုပါမယ်။
(၄) Langauge - အသုံးအနှုန်း မှန်ကန်ခြင်း၊ သုံးတဲ့ စကားလုံး ဝေါဟာရတွေမှန်ခြင်း၊ ကောင်းခြင်း၊လှခြင်းကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ သဒ္ဒါမှန်ခြင်း၊ ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံ မှန်မှန်နဲ့ ဝါကျအမျိုးမျိုးကို ရေးတတ်ရပါမယ်။
(၅) Presentation - တင်ပြပုံကောင်းခြင်း၊ ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကို စာဖတ်သူစိတ်ဝင်စားအောင် ဖွဲ့နွဲ့တင်ပြနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ထပ်မံသတိပေးလိုတာကတော့ ပေးစာရေးရာမှာဖြစ်ဖြစ် စာစီစာကုံးရေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စာလုံးရေကန့်သတ်ထားတာကို သတိရှိပါ။
ဆီလျော်မှုရှိတဲ့ ပေးစာတွေ၊ စာစီစာကုံးတွေကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်၊ ထိထိမိမိ၊ သဒ္ဒါမှန်မှန်နဲ့ရေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
နှစ်တိုင်းလိုလို စာစစ်ရာမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲကတော့ ပေးစာတွေ၊ စာစီစာကုံးတွေကို အရှည်ကြီးရေးသားပြီး ဆီလျော်တာ ရော မဆီလျော်တာတွေရောကို စုပြုံ ရေးသားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးရေ ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက် မဆီလျော်တာတွေပါနေရင် ဆီလျော်တာတွေ ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာမရေးခင်မှာ မိမိရေးသားမယ့် အကြောင်းအရာကို သေသေချာချာအစီအစဉ် ချပြီးမှ ရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မေးထားတဲ့ အချက်တွေ အားလုံးကို ထည့်သွင်းရေးသားနိုင်ပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုကြမယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို အထူးမှာချင်တာကတော့ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာပါတဲ့ သင်ခန်းစာ(၁၄) ခု လုံးက စာပိုဒ်တွေအားလုံးကို သေသေချာချာ လေ့လာ မှတ်သားဖို့၊ စကားလုံးတွေရဲ့ ဝေါဟာရတွေအပြင် သူတို့ကို ဘယ်လို အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုပါ သိရှိအောင်လေ့လာဖို့၊ ပေးထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို များများလေ့ကျင့်ဖို့၊ ကဗျာ တွေကိုလည်း ရွတ်ဆို နိုင်ရုံ သာမက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတတ်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။
ပေးစာနဲ့စာစီစာကုံးတွေကိုလည်း ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ဆီလျော်မှန်ကန်အောင်ရေးတတ်ဖို့လည်း ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြပါလို့ မှာကြားလိုပါတယ်။
ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအားလုံး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို အခက်အခဲမရှိ ထူးထူး ချွန်ချွန်နဲ့ ဖြေဆိုအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက် ပါတယ်။
Unicode version below
၂၀၁၉ခုနှဈ၊ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ ဘာသာရပျဆိုငျရာ ပို့ခခြကျြ (အင်ျဂလိပျစာ) အတှကျ ဒေါကျတာ ပိုးပိုး ပါမောက်ခ (ဌာနမှူး) အင်ျဂလိပျစာဌာန၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ မှ ပွောကွားပေးခဲ့ပါသညျ။
တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အင်ျဂလိပျစာဘာသာရပျ မေးခှနျးဟာ ယခငျနှဈတှနေဲ့မတူ အနညျးငယျ ပွောငျးလဲမှု ရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးသား ကြောငျးသူတှေ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျကို အလှတျကကျြမှတျဖွဆေိုမှု လြော့နညျးစပွေီး ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား၏ စဉျးစားတှေးချေါမှု (Critical Thinking) နှငျ့ ပွောဆိုဆကျဆံနိုငျမှု (Communicative Skills) ပိုမိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစဖေို့နဲ့ ခတျေနှငျ့လြျောညီတဲ့ မေးခှနျးတှေ ဖွဈလာစဖေို့ ရညျရှယျပွီး ၂၀၁၉ခုနှဈက စတငျ ပွောငျးလဲမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကြောငျးသားကြောငျးသူတှအေတှကျ အခကျအခဲ မဖွဈစဘေဲ သူတို့ရဲ့ စဉျးစားဉာဏျ ပိုမို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစမေယျ့ အကြိုးကြေးဇူးကို ရှေးရှုပွီး မေးခှနျးအခြို့ကို မှမျးမံပွငျဆငျ ဖွညျ့စှကျမှာ ဖွဈပါတယျ။
မေးခှနျး တှကေို ကြောငျးသားအမြားဆို ဖွဆေိုနိုငျမယျ့ လှယျ၊ သငျ့၊ ခကျ မေးခှနျးတှေ ပါဝငျမှာဖွဈလို့ သငျခနျးစာမြားကို ကညြေကျစှာ လလေ့ာထားတဲ့ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ဖွဆေိုနိုငျမယျ့ မေးခှနျးပုံစံဖွဈပါတယျ။ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျနဲ့ မေးခှနျးပုဒျရေ စုစုပေါငျး (၉)ပုဒျကို ပွောငျးလဲမှာ မဟုတျပါဘူး။ မေးခှနျးအမြားစုဟာ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျပါ အကွောငျး အရာတှကေို အခွခေံပွီး မေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
မေးခှနျးနံပါတျ(၁)ကတော့ ယခငျနှဈတှကေအတိုငျး သငျခနျးစာ (၁၄) ခုထဲက စာပိုဒျတဈပိုဒျကို ပေးထားပွီး အဲဒီစာပိုဒျမှာ ပါတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို မေးခှနျးအမြိုးအစား(၂)မြိုးနဲ့ မေးမှာဖွဈတယျ။
Question No. I (A) Write the correct word or words to complete each sentence. ဖွဈပါတယျ။ ပေးထားတဲ့စာကွောငျးကို အဓိပ်ပာယျပွညျ့စုံအောငျ ကှကျလပျဖွညျ့ပေးရမှာ ဖွဈတယျ။
ဝါကြ(၅)ကွောငျး ပေးထားပွီး ပေးထားတဲ့ ကှကျလပျမှာ စာလုံးတဈလုံး ဒါမှမဟုတျ စကားစုတဈစုနဲ့ကှကျလပျကိုဖွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သတိပွုရမှာက ပေးထားတဲ့ဝါကရြဲ့ တညျဆောကျပုံပျေါမူတညျပွီး သငျ့လြျောသလို စကားလုံးတှကေို ပွောငျးရေးဖို့ လိုကောငျးလိုပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ - စာပိုဒျထဲမှာ Noun သို့မဟုတျAdjective နဲ့ရေးထားပမေယျ့ ဖွညျ့ရမယျ့ ကှကျလပျမှာ Verb ပွောငျးပွီး ဖွညျ့ခငျြဖွညျ့ ရပါမယျ။ စာပိုဒျထဲမှာ PassiveVoiceနဲ့ ရေးထားပမေယျ့ ဖွညျ့ရမယျ့ ကှကျလပျမှာ Active Voice နဲ့ ဖွညျ့ခငျြဖွညျ့ရပါမယျ။
ဥပမာ - စာပိုဒျထဲမှာ Different people have different ideas of beauty or handsomeness. လို့ ပေးထားပမေယျ့ မေးခှနျးမှာ Ideas of beauty and handsomeness ---------- from person to person.လို့ ပေးထားရငျ ဒီကှကျလပျမှာ ဖွညျ့ရမယျ့စကားလုံးက Verb ဖွဈရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ Different ဆိုတဲ့ စာပိုဒျထဲက စာလုံးကို ဒီအတိုငျး ပွနျကူးရေးလို့မရပါဘူး။ Different ကို differ လို့ ပွောငျးပေးမှ အဖွမှေနျမှာဖွဈပါတယျ။ တဈခါတဈရံ Active Voice ကို Passive Voice နဲ့ ပွောငျးဖို့ လို ကောငျးလိုပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ- စာပိုဒျထဲမှာ Helen was almostawild child. No one could control her. လို့ပေးထားပမေယျ့ မေးထားတဲ့စာကွောငျးက Helen could not ---------- by anyone, because she was almostawild child. လို့ပေးထားမယျဆိုရငျ ဒီစာကွောငျးမှာဖွညျ့ရမယျ့ စကားလုံးဟာ Passive Voice ဖွဈရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ control လို့ ဖွပေေးလို့မရပါဘူး။ be controlled လို့ရေးမှ အမှနျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Question No. I (B) ကတော့ Answer each question in one sentence. ဖွဈပါတယျ။
စာပိုဒျထဲမှာပါတဲ့ အကွောငျးအရာအခကျြအလကျတှကေို မေးတဲ့မေးခှနျး(၅)ခု ပေးထားပွီး ဒီမေးခှနျးတှကေို ပေးထားတဲ့ စာပိုဒျထဲက အဖွရှောပွီး ပွညျ့စုံတဲ့ဝါကတြဈကွောငျးနဲ့ ဖွပေေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အမှတျပွညျ့ရရှိဖို့အတှကျ မေးခှနျးမှာမေးတဲ့ အခကျြအလကျ (fact) ရော သဒ်ဒါ (grammar) ပါ မှနျမှနျကနျကနျနိုငျအောငျ မြားမြားလကေ့ငျြ့ထားဖို့လိုပါတယျ။
ဥပမာ - She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. လို့ပေးထားပွီး When Helen became angry and violent, what did she do? လို့မေးခဲ့ရငျ ပေးထားတဲ့ စာပိုဒျထဲကစာကွောငျး She became angry and violent very easily and threw things onto the floor or at other people. ကို ပွနျကူးခလြို့ မရပါဘူး။ မေးထားတဲ့ မေးခှနျးကို ပွနျကောကျပွီး When Helen became angry and violent, she threw things onto the floor or at other people. လို့ ပွနျဖွပေေးရပါ့မယျ။
The beach resorts at Pattaya and Phuket offerawide range of activities from scuba diving and windsurfing to golf. ဒါ့အပွငျ What examples of water sports are given in the passage? လို့မေးခဲ့ရငျ The examples of water sports (that are) given in the passage are scuba diving and windsurfing လို့ ဖွမှေမှနျပါမယျ။ water sports ကို မေးတာဖွဈလို့ golf ကို ထညျ့ရေးရငျ အမှတျပွညျ့မရနိုငျပါဘူး။ တဈခါတဈရံမှာ စာပိုဒျထဲက အကွောငျးအရာနဲ့ ဆကျစပျပွီး မိမိကိုယျတိုငျ ဆုံးဖွတျဖွဆေိုရတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှလေညျး မေးနိုငျပါတယျ။
ဥပမာ - Some think that men who are tall, dark and muscular are handsome but for some, those who are fair and slightly built are cute ... Girls who are tall usually long to be dainty and small, and vice versa; plump girls with rosy round faces would love to be pale and delicate; slender girls with very white skin hate their pale and colourless look. ဆိုတဲ့ ဖတျစာအုပျထဲက စာပိုဒျပေးထားပွီး What kind of boy or girl would you like to be ? လို့မေးခဲ့ရငျ ပေးထားတဲ့ စာပိုဒျကို ကိုးကားပွီး I would like to beatall, dark and muscular boy.(သို့မဟုတျ) I would like to beaslender girl. လို့ပဲ ဖွလေို့ရပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ Iwould like to beabeautiful girl. လို့ ရေးလို့ရပါတယျ။ အဓိကကတော့ ယုတ်တိရှိတဲ့ အဖွဖွေဈဖို့နဲ့ သဒ်ဒါမှနျဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျပါ စာပိုဒျမြားနဲ့မေးခှနျးတှကေို အလှတျကကျြမှတျတာထကျ မေးခှနျးအမြိုးမြိုးကို တတျအောငျ လကေ့ငျြ့ ထားဖို့လိုပါတယျ။ စာပိုဒျထဲက သကျဆိုငျတယျထငျတဲ့ စာကွောငျးတှကေို တိုကျရိုကျကူးခပြေးလိုကျတာမြိုးလညျး မပွုလုပျကွဖို့ သတိပေးခငျြပါတယျ။ မေးထားတာကို ဆီလြျောအောငျ မှနျမှနျကနျကနျဖွတေတျအောငျ လကေ့ငျြ့ထားဖို့လိုပါတယျ။
မေးခှနျးနံပါတျ (၂) ကတော့ Fill in each numbered blank withaword from the list given. There are five extra words. Write down only the number of the blank and the word that fills it. ဖွဈပါတယျ။
ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျမှာပါတဲ့ သငျခနျးစာ(၁၄) ခု ထဲက စာပိုဒျတဈပိုဒျပေးထားပွီး (၈)လုံးမွောကျ စကားလုံးတှမှော ကှကျလပျဖွညျ့ ပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ကှကျလပျပေါငျး(၂၀)ရှိပွီး ဒီကှကျလပျတှကေို ဖွညျ့စှကျ ဖို့ စကားလုံး(၂၅)လုံးကိုလညျး ပေးထားပါတယျ။
သတိပွုရမယျ့အခကျြကတော့ စာလုံး(၅)လုံး ပိုပေးထားတာပါပဲ။ စာပိုဒျကွီး တဈပိုဒျလုံးကို ပွနျကူးရေးဖို့မလိုပါဘူး။ ကှကျလပျ နံပါတျနဲ့ အဖွကေိုသာ ရေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးဟာ ကြောငျးသား ကြောငျးသူ တှရေဲ့ အင်ျဂလိပျစာတတျမွောကျမှုကို ခွုံငုံစဈဆေးတာ ဖွဈပါတယျ။
မေးခှနျးနံပါတျ(၃) ကိုတော့ ယခငျနှဈမြားနဲ့မတူဘဲ III(A)နဲ့ III(B) ဆိုပွီး (၂)ပိုငျး ခှဲထားပါမယျ။ III (A) ကတော့ Choose the appropriate word to complete the sentences. ဖွဈပါတယျ။
ဖတျစာအုပျထဲမှ စကားလုံးမြားကို ကှကျလပျဖွညျ့မေးခှနျးအနနေဲ့ ဝါကအြသဈမှာ ထညျ့ပေးတာဖွဈပါတယျ။ ရှေးခယျြဖို့ စကားလုံး (၃)လုံး ပေးထားပွီး မှနျတဲ့စကားလုံးကို ရှေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ - Space travel is one of the ----------- of modern science and technology. လို့ပေးထားပွီး ရှေးခယျြစရာ A. activities B. wonders C. surprises လို့ ပေးထားပါ့မယျ။
အဖွမှေနျက B.wondersလို့ မေးခှနျးနံပါတျနဲ့အဖွကေို ရေးပေးရပါမယျ။ ပေးထားတဲ့ဝါကရြဲ့အဓိပ်ပာယျနဲ့ ရှေးခယျြဖို့ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတှကေို ဘယျလိုသုံးရတယျဆိုတာ သိရှိမှ အဖွမှေနျကို ရှေးခယျြ နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျဥပမာတဈခုကတော့ Animals can be classified ---------- different types ဖွဈပွီး ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတှကေ A. into B. in C. ont ဖွဈမယျဆိုရငျ အမှနျက A. int ဖွဈပါတယျ။ မေးထားတဲ့ ဝါကတြဈကွောငျးလုံးကို ပွနျကူးဖို့ မလိုပါဘူး။ နံပါတျတပျပွီး အဖွကေိုရေးရငျ ရပါတယျ။
III (B) ကတော့ Write the appropriate words or groups of words to complete the lines of verse. ဖွဈပွီး ကဗြာ(၇)ပုဒျထဲက ကောကျနုတျခကျြတှကေို ကှကျလပျဖွညျ့မေးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးဟာ ကြောငျးသားကြောငျးသူတှရေဲ့ သငျယူထားတဲ့ကဗြာတှကေို နားလညျမှတျသားပွီး ပွနျလညျရေးသားနိုငျမှုကို စဈဆေးတာဖွဈပါတယျ။ တိတိ ကကြ ပွနျလညျဖျောပွဖို့လိုတဲ့ အတှကျ စာလုံး ပေါငျးမှားယှငျးမှု မရှိအောငျ သတိထားကွဖို့လိုပါတယျ။
ဥပမာ- A great steel bridge
With towers ------------ လို့မေးရငျ stiff and tall လို့ ဖွပေေးရမှာဖွဈပါတယျ။ မေးထားတဲ့စာကွောငျးတှကေို ပွနျကူးဖို့မလိုပါဘူး။
မေးခှနျးနံပါတျ(၄)ကတော့ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျကို ကကြေညြေကျညကျ လလေ့ာထားမှု ရှိမရှိ စဈဆေးဖို့ မေးခှနျး(၅)ခု မေးထားပါတယျ။
ယခငျနှဈမြားကလို ရှေးခယျြစရာပေးမထားတာကို သတိပွုမိဖို့လိုပါတယျ။ ကြောငျးသား ကြောငျးသူမြားဟာ အခကျြအလကျရောသဒ်ဒါပါ မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ ဖွကွေားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ What are nightmares and when do they occur ? လို့ မေးထားတယျဆိုရငျ Nightmares are terrifying dreams,acollection of confused thoughts and they occur towards dawn. လို့ ပွနျဖွေ ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Name two advantages of self-service supermarkets. လို့မေးခဲ့ရငျ Two advantages of self-service supermarkets are that there is no waiting to be served and there isawide variety of choice. လို့ ပွနျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျပုံစံတဈခုဖွဈတဲ့ Who said these words and to whom were they said? What do they mean?
"Oh, to hell with your stars and constellations!" ဆိုတဲ့ ပုံစံလညျး မေးနိုငျပါသေးတယျ။ ဒါဆိုရငျ The philosopher, the medico, the man of music and dancing said these words to the astrologer. They mean that after plucking the tender bael leaves, the astrologer was waiting for the influence of the descending constellations to come down. Therefore his three friends became impatient with him and yelled at him saying these words. လို့ ဖွပေေးရမှာပါ။
ဒီမေးခှနျးတှကေို မှနျမှနျကနျကနျဖွဆေိုနိုငျဖို့ သငျခနျးစာ (၁၄) ခု လုံးမှာပါတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို အသေးစိတျဖတျပွီး မှတျသား ထားဖို့လိုပါတယျ။ ယခုပွတဲ့ အဖွတှေကေ နမူနာအဖွမြေားသာ ဖွဈပါတယျ။
ဆိုလိုရငျးမှနျကနျတဲ့ သဒ်ဒါမှနျတဲ့ ဘယျအကိုမဆို လကျခံပါတယျ။ မေးခှနျးနံပါတျ(၄) အပုဒျငယျ(၅)ကတော့ ကဗြာတှထေဲက စာကွောငျးနှဈကွောငျးလောကျကို ပေးထားပွီးဆိုလိုရငျး အဓိပ်ပာယျကို ရေးခိုငျး တာဖွဈပါတယျ။ What do these lines mean? လို့ မေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးကိုဖွနေိုငျဖို့ကတော့ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ ကဗြာတှရေဲ့ အဓိပ်ပာယျကို နားလညျသိရှိထားဖို့ လိုပါတယျ။ ကဗြာကို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုတဲ့အခါမှာ ဆိုလိုရငျး အဓိပ်ပာယျရော သဒ်ဒါရော မှနျရပါမယျ။